Kianja Barea Mahamasina: ho vita tsy ho ela ny “tribune centrale” | NewsMada
Kianja Barea Mahamasina: ho vita tsy ho ela ny “tribune centrale”
Par Taratra sur 17/09/2020
Mizotra araka ny tokony ho izy ny fanamboarana ny kianja Barea Mahamasina, na teo aza ny fisian’ny valanaretina “covid-19”. Fantatra ary izao, taorian’ny fitsidihana ifotony nataon’ny mpanolotsaina manokan’ny filoham-pirenena amin’ny tetikasa an-tanan-dehibe sy ny fotodrafitrasa ary ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny alatsinainy lasa teo fa ho vita mialoha ny 14 oktobra ny fandrarahana ny «béton» amin’ny « tribune centrale». Aorian’izay, hisy akora atao eo amboniny, ho mateza tsara. Efa eo am-pamitana ny rihana fahatelo amin’ireo efatra hipetraka amin’ny “tribune centrale” ny orinasa CSCOD (China state construction overseas development), amin’izao fotoana izao.
Ankoatra izay, hisy tohatra roa lehibe amin’ny sisin’ny “tribune”, ho fidirana any amin’ny rihana voalohany, izay mahazaka mpijery eo amin’ny 2904. Ho an’ny “gradin» vaovao indray, efa vita ny 90%, amin’izao fotoana izao, ny fototra miisa 172.
Efa voarafitra ihany koa ireo fantsona hitondra ny jiro sy ny rano. Toy izany koa ny toerana hametrahana ireo birao isan-tokony sy ny toeram-pivoahana. Mahakasika ny kianja filalaovana, efa eo am-pamaranana ny fifantenana ny orinasa manokana hanatanteraka izany ny CSCOD, ankehitriny. Marihina fa bozaka natoraly, saingy misy fomba fanondrahana avy any ambanin’ny tany no hatao aminy. Hanomboka ny volana desambra ny fametrahana ireo fantsona fanondrahana ary aorian’ny fotoan’ny orana no hampitsiry ny bozaka.